လေယာဉ်ပျံမုဒ်- ၎င်းသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် အဘယ်အရာအတွက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို မည်သို့စဖွင့်ရန်နှင့် ပိတ်ရန် - VidaBytes | LifeBytes
Encarni Arcoya | 30/05/2022 08:27 | အဆင့်မြှင့်တင် 31/05/2022 08:34 | ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
ယေဘူယျ စည်းမျဉ်းအရ၊ လေယာဉ်စီးတဲ့အခါ လေယာဉ်မုဒ်ကို မှတ်သားထားရတာမို့ ပျံသန်းချိန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိုဘိုင်းလ်ကို ချိတ်ဆက်မှုဖြုတ်ရန် သို့မဟုတ် ၎င်းကို ထားရမည်ဖြစ်သည်။အများသူငှာ လိပ်စာစနစ်၊ "လေယာဉ်ပျံမုဒ်" အကြောင်းကို သူတို့က ပြောပြသည်။
သို့သော် အတိအကျကား အဘယ်နည်း။ ဘာအတွက်လဲ ဘယ်လိုဝတ်ပြီး ချွတ်မလဲ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်လှည့်ကွက်များရှိပါသလား။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးရင် အားလုံးကို ဖြေပေးမယ်။
2 လေယာဉ်ပျံမုဒ်ကို ဘာအတွက်သုံးတာလဲ။
2.3 မမြင်ရဘဲ WhatsApp တွင်ရေးပါ။
2.4 ချိတ်ဆက်မှုများကို ပြန်လည်စတင်ပါ။
3 လေယာဉ်ပျံမုဒ်ကို အဖွင့်အပိတ်လုပ်နည်း
3.1 Android တွင် ဖွင့်/ပိတ်ပါ။
3.2 iPhone တွင် အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပါ။
3.3 ကွန်ပြူတာတွင် အသက်သွင်းပြီး ပိတ်ပါ။
လေယာဉ်ပျံမုဒ်သည် အမှန်တကယ်တွင် သင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် ရှိနေသည့် ဆက်တင်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် တက်ဘလက်များ၊ လက်ပ်တော့များ၊ ကွန်ပျူတာများတွင်လည်း ရှိနေပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုများကို ဖြတ်တောက်ရန်ဖြစ်သည်။WiFi၊ ဖုန်းဒေတာ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု သို့မဟုတ် မက်ဆေ့ချ်အချက်ပြ သို့မဟုတ် Bluetooth ပင်ဖြစ်ပါစေ။
ဆိုလိုသည်မှာ ဖုန်းသည် လုံးဝ အသုံးမဝင်တော့ပါ။ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့် SMS နှင့် အပလီကေးရှင်းများ အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ အင်တာနက်အသုံးမပြုသူများသာ အလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်း ကျန်အရာများကို ဤမုဒ်ကိုပိတ်သည်အထိ ဆိုင်းငံ့ထားမည်ဖြစ်သည်။
ဤနည်းကို ခေါ်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ လေယာဉ်ဖြင့် ခရီးသွားသည့်အခါတွင် မိုဘိုင်းလ်နှင့် ထုတ်လုပ်သူများ အသုံးမပြုနိုင်သော လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များက ရှိခဲ့သော တားမြစ်ချက်အား ရည်ညွှန်း၍ မိုဘိုင်းကို မပိတ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဤဆက်တင်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် ၎င်းကို ပျံသန်းမှုတွင် အသက်မသွင်းခြင်းကြောင့် ဘာမှမဖြစ်ဟု သိထားသော်လည်း၊သူတို့က အဲဒါကို ဆက်ပြီး အကြံပေးတယ်၊ စိုးရိမ်းတယ်။ သို့သော်လည်း 2014 ခုနှစ်မှ စတင်၍ ၎င်းကို အသက်မသွင်းဘဲ ပျံသန်းနိုင်သည် (EASA သို့မဟုတ် ဥရောပကော်မရှင်မှ ခွင့်ပြုထားသည်)။ ဤဖြစ်နိုင်ချေရှိလင့်ကစား လေကြောင်းလိုင်းများသည် ပျံသန်းမှုတွင် တတ်နိုင်သရွေ့ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်များကို နောက်ဆုံးစကားလုံးပါရှိသော လေကြောင်းလိုင်းများဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားထားပါ။
တစ်ချိန်ချိန်တွင် သင်သည် လေယာဉ်ပျံမုဒ်ကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး ပျံသန်းရန် အတိအကျမဟုတ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ ၎င်းမှာ ၎င်း၏အဓိကအသုံးပြုမှုမှာ ဤအရာဖြစ်သည်ဆိုသော်လည်း၊ ၎င်းသည် နေ့စဉ်ပုံမှန်အသုံးပြုမှုပိုများသည်။ အဖြစ်များဆုံးအချို့မှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စက်ပစ္စည်းများ (မိုဘိုင်း၊ တက်ဘလက်၊ ကွန်ပျူတာ) နှင့် ပိုမိုချိတ်ဆက်နေကြောင်း သတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည် ၎င်းတို့ထံမှထွက်လာသော မည်သည့်အသံကိုမဆို တုံ့ပြန်သည်။ညနက်သန်းခေါင်မှာ အိပ်ရာကနိုးလာတဲ့အထိ ဘာရောက်လာမှန်းမသိ။
ပြီးတော့ ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိပ်စက်ခြင်းကို ထိခိုက်စေတယ်။
ထိုကွောငျ့, လေယာဉ်ပျံမုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် မိုဘိုင်းကို ပိတ်စရာမလိုဘဲ ခေတ္တရပ်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီး​တော့ သင့်​ခန္ဓာကိုယ်​က သင့်​ကို ​ကျေးဇူးတင်​မယ့်​အတွက်​ နာရီအနည်းငယ်​ ငြိမ်​သက်​ပြီး အနားယူခွင့်​​ပေးပါ။
နောက်ထပ် အသုံးများသော လေယာဉ်ပျံမုဒ်မှာ ဘက်ထရီကို ချွေတာရန် ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်၊ ဘလူးတုသ်နှင့် အခြားချိတ်ဆက်မှုများစွာကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွင့်ထားပါက ဘက်ထရီကုန်သွားကြောင်း လူသိများသည်။ နည်းနည်းကျန်သေးရင်၊ ၎င်းကိုအသက်သွင်းခြင်းဖြင့် ၎င်းကိုထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးနိုင်သော်လည်း ၎င်းမှာ ပြဿနာရှိသော်လည်း ဆက်သွယ်ရန်မဖြစ်ဘဲ ဖုန်းကို ထားသွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။.
အစွန်းရောက်မှုနည်းပါးသည့်အရာမှာ ဒေတာနှင့် WiFi တို့ကို မချိတ်ဆက်နိုင်အောင် ဖယ်ရှားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
မမြင်ရဘဲ WhatsApp တွင်ရေးပါ။
ဤအရာသည် များစွာသောအသုံးအများဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင် အခြေအနေများကို မြင်နိုင် သို့မဟုတ် "ခိုးဝှက်" မပေါ်ဘဲ မက်ဆေ့ချ်များကို တုံ့ပြန်နိုင်စေရန် လေယာဉ်ပျံမုဒ်ကို ဖွင့်ထားရန် ပါဝင်ပါသည်။ ဖြေဆိုတဲ့အခါ 'စာရေးခြင်း'။
ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် သင်၏တုံ့ပြန်မှုကို အချိန်ယူနိုင်သည် သို့မဟုတ် မက်ဆေ့ချ်များမရရှိဘဲ အက်ပ်ထဲမှ အချိန်ကုန်သွားနိုင်သည်။
၎င်းသည် လူသိနည်းသော အသုံးပြုမှုဖြစ်သော်လည်း သင့်ဖုန်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှု ပြဿနာများ (သင့်တွင် အချက်ပြမှုမရှိ၊ ပြတ်တောက်သွားခြင်း၊ ကောင်းစွာ မကြားရနိုင်ခြင်း စသည်ဖြင့်) ပေးသည့်အခါ အလွန်ထိရောက်ပါသည်။ အဲဒီလိုဖြစ်လာရင်၊လေယာဉ်ပျံမုဒ်ကို ငါးမိနစ်အတွင်း အဖွင့်အပိတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။ ချိတ်ဆက်မှုများကို ပြန်လည်စတင်ပါ။
ယခုအခါတွင် လေယာဉ်ပျံမုဒ်အကြောင်း ပိုမိုသိရှိလာသဖြင့်၊ ၎င်းကို သင့်မိုဘိုင်းတွင် စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး Android သို့မဟုတ် iPhone မည်ကဲ့သို့ ပိတ်ရမည်ကို သိရှိရန် အချိန်ကျရောက်ပြီဖြစ်သည်။
အမှန်က ၎င်းသည် ဖုန်း၏ အမြန်ထိန်းချုပ်မှုများတွင် ရှိသောကြောင့် ၎င်းသည် အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဒါပေမယ့် သင် အရင်က မလိုအပ်ဖူးဘဲ ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာ မသိဘူးဆိုရင်တော့ သင့်အတွက် လွယ်ကူစေမှာပါ။
Android တွင် ဖွင့်/ပိတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Android ဖုန်းများနှင့်စတင်သည်။ အမှန်က ၎င်းကို အသက်သွင်းရန် နည်းလမ်းများစွာရှိသည် (ထို့ကြောင့် ၎င်းကိုပိတ်ရန်) ထို့ကြောင့် သင့်တွင် ရွေးချယ်စရာများရှိသည်-
ပိတ်ခလုတ်ကို အသုံးပြု. ပါဝါခလုတ်ကို ဖိထားပြီး လုံးဝမပိတ်ခင်မှာ မီနူးလေးတစ်ခုပေးမယ့် ဖုန်းတွေရှိပါတယ်၊ ခလုတ်တစ်ခုက လေယာဉ်ပျံရဲ့ခလုတ်တစ်ခုပါ။ ၎င်းသည် လေယာဉ်ပျံမုဒ်ဖြစ်ပြီး ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ၎င်းကို အသက်သွင်းနိုင်သည် (ထို့အတူ ၎င်းကို ပိတ်ပစ်ရန်)။
Android ချိန်ညှိချက်များတွင်။ သင့်ဖုန်းပေါ်ရှိ ဆက်တင်ခလုတ်ကို သင်ထည့်သွင်းပါက၊ ၎င်းကိုရှာဖွေရန် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခု ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ သို့သော် ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းသည် မီနူး၏ထိပ်တွင် သို့မဟုတ် WiFi နှင့် မိုဘိုင်းကွန်ရက်များတွင် ပေါ်လာလိမ့်မည်။ အဲဒါကို activate လုပ်ရမှာက ဒါပဲ။
အသိပေးချက်ဘားတွင်. အကြောင်းကြားချက်ဘားကို နှိမ့်လိုက်လျှင် (အပေါ်မှအောက်ခြေသို့ သင်၏လက်ချောင်းကိုယူ၍) နှင့် အမြန်ဝင်ရောက်မှုထိန်းချုပ်မှုများတွင်၊ ၎င်းကိုစသုံးရန် (သို့မဟုတ် ပိတ်ရန်) လေယာဉ်အိုင်ကွန်ခလုတ်ကို သင့်တွင်ရှိလိမ့်မည်။
iPhone တွင် အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပါ။
သင့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသည် iPhone ဖြစ်ပါက၊ သင်သည် ၎င်းကို Android တွင် အမြဲလိုလို တွေ့ရလိမ့်မည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ-
သင့်ဖုန်း၏ ဆက်တင်များ မီနူးတွင်အစတွင်ဖြစ်စေ WiFi နှင့်ချိတ်ဆက်မှုများကိုကြည့်ရှုပါ။
သင်၏ iPhone ၏ထိန်းချုပ်မှုဗဟိုတွင်.
ကွန်ပြူတာတွင် အသက်သွင်းပြီး ပိတ်ပါ။
လေယာဉ်ပျံမုဒ်ခလုတ်ပါရှိသော လက်ပ်တော့များနှင့် ကွန်ပျူတာများစွာရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ချက်မပေးမီက ပြောကြားခဲ့သည်။ တာဝါကွန်ပြူတာတွင်၊ သင့်တွင်ရှိသော ချိတ်ဆက်မှုများကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ အသုံးပြုမှုမှာ အလွန်ရှားပါးသော်လည်း လက်တော့ပ်များတွင် အထူးသဖြင့် သင်ခရီးထွက်ပြီး ၎င်းနှင့်အလုပ်လုပ်ပါက ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၎င်းကို အသက်သွင်းခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းသည် သင် Windows၊ Linux သို့မဟုတ် Mac ကို အသုံးပြုခြင်းရှိမရှိအပေါ် မူတည်ပါသည်။ သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်၊ သို့သော် ၎င်းတို့အားလုံးနီးပါးတွင် ၎င်းကို ပင်မမီနူးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင် ရှာဖွေခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် လေယာဉ်ပျံတစ်ခုနှင့် သင်္ကေတတစ်ခု (သင့်မိုဘိုင်းပေါ်ရှိ တစ်မျိုးတည်း) ကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် ၎င်းကို အလွယ်တကူ တွေ့ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ နောက်ပိုင်းမှာ ၎င်းကို deactivate လုပ်ရန် မမေ့ပါနှင့်၊ သို့မဟုတ်ပါက နောက်ပိုင်းတွင် ကွန်ရက်တစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်ရန် မည်မျှပင်ကြိုးစားပါစေ၊ ၎င်းကို ခွင့်မပြုပါ။
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ၊ လေယာဉ်ပျံမုဒ်ကို မူလက လေယာဉ်ပျံတွေအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပေမယ့် အခုခေတ်မှာတော့ နောက်ထပ်အသုံးပြုမှုတွေ အများကြီးရှိလာပါတယ်။ အခွင့်အရေးပေးပြီး ကြိုးစားဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ မိုဘိုင်းမရှိရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု » လေယာဉ်ပျံမုဒ်- ၎င်းသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် အဘယ်အရာအတွက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို မည်သို့စတင်ရန်နှင့် ပိတ်ရန်
Disney Plus တွင် Harry Potter ရှိပါသလား။